पशुपतिनाथले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल आश्विन १ गते सोमवार – Etajakhabar
पशुपतिनाथले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल आश्विन १ गते सोमवार
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग÷वारवेला,मुहूर्त र राशी श्रीसूर्य दक्षिणायन,शरद ऋतु,विरोधकृत् नाम संवत्सर,शाके १९४०,सम्वत २०७५ साल आश्विन १ गते सोमवार नेपाल सम्बत ११३८ ञलाथ्व,सन् २०१८ सेप्टेम्बर १७ तारिक शुक्लपक्ष अष्टमी तिथि साँझ ७ वजेर २९
मिनेटसम्म,ज्येष्ठा नक्षत्र विहान ८ वजेर ४ मिनेटसम्म,आयुष्मानयोग,भद्राकरण,आनन्दादियोग पद्म,सूर्य कन्या राशीमा,चन्द्रमा विहान ८ वजेर ४ मिनेटसम्म वृश्चिक उप्रान्त धनु राशीमा । ॐः–राहुकालः–विहान७÷२२वजेबाट८÷५४ वजेसम्म रहनेछ,यमघण्टायोगः–पूर्वान्ह१०÷२६ वजेबाट११÷५८वजेसम्म रहनेछ,दूरमुहूर्तः– मध्यान्ह १२÷२२ वजेबाट अपरान्ह१÷११ वजेसम्म र २÷४९ वजेबाट ३÷३८ वजेसम्म रहनेछ,यी अशुभ मुहूर्त मानिन्छ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷३३ वजेबाट मध्यान्ह १२÷२२ वजेसम्म रहनेछ । गुली कालः–अपरान्ह १÷३० वजेबाट ३÷२ वजेसम्म रहनेछ,यो सामान्य मानिन्छ ।
ॐःसूर्योदयबाट प्रातः७÷२२ वजेसम्म अमृतवेला,७÷२२वजेदेखि ८÷५४ वजेसम्म कालवेला,८÷५४ देखि १०÷२६ वजेसम्म शुभवेला,१०÷२६ देखि ११÷५७ वजेसम्म रोगवेला,११÷५७ देखि १÷२९वजेसम्म उद्वेगवेला,१÷२९ देखि ३÷१ वजेसम्म चरवेला,३÷१ देखि ४÷३३ वजेसम्म लाभवेला र ४÷३३ वजे देखि सूर्यास्तसम्म अमृतवेला रहनेछ ।
ॐःसूर्यास्तबाट ७÷३३ वजेसम्म चरवेला,७÷३३ वजेदेखि ९÷१ वजेसम्म रोगवेला,९÷१ देखि १०÷२९ वजेसम्म कालवेला,१०÷२९ देखि ११÷५८ वजेसम्म लाभवेला,११÷५८ देखि१÷२६ वजेसम्म उद्वेगवेला,१÷२६ देखि २÷५४वजेसम्म शुभवेला,२÷५४वजे देखि ४÷२२ वजेसम्म अमृतर ४÷२२वजे देखि सूर्योदयसम्म चर वेला रहनेछ ।
समयमा सुधार आउनेछ । काममा विस्तारै प्रगति हुनेछ तर सोचे जस्तो भने हुने छैन । मानसिक तनाव घट्नेछ । इज्जत प्रतिष्ठा वचाएर काम गर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट अल्प लाभ हुनेछ । यात्रा हुनसक्छ ।
गलत विचार बढ्नेछ । स्वास्थ्य प्रतिकुल हुने हुदा खानपानमा विचार पु¥याउनु होला । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दि कायम रहन सक्छ । आत्मबल बढाउनु पर्ने देखिन्छ । फजुल खर्च बढ्नेछ । मान्छेले धोका दिने छन् ।
ग्रह गोचर सामान्य अनुकुल देखिन्छ । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । स्वव्यवसायबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । समयको सदुपयोग गर्न पछि नपर्नु होला । आयात निर्यात व्यापारबाट आम्दानी बढ्नेछ ।
मनमा भय त्रास उत्पन्न हुनेछ । काम सम्पन्न गर्न कडा मेहनत गर्नु पर्ला । धैर्यतापूर्वक दृढ भएर काममा लाग्नु होला अवस्यमेव सफल हुनुहुनेछ । व्यापार व्यवसायमा नयाँ सम्भावना देखिने छन् । शत्रु बढ्ने छन् ।
दुविधामा नपरि काम गर्नु होला । समयमा निर्णय लिन सकिएन भने अवसर फुत्किने देखिन्छ । यात्रामा समस्या आउनेछ । पढाई र सन्तानको बारेमा चिन्ता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ होला ।
घरयासी समस्या बढ्ने छन् । भौतिक सुख सुविधामा कमि आउनेछ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि लाग्न सक्छ । मनमा नानाथरिका कुरा खेल्ने छन् । स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । पारिवारिक खर्च बढ्नेछ ।
नयाँ कामको अवसर आउनेछ,नयाँ अनुभव बटुलिनेछ । । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रै हुनेछ । गरेका कामबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । साथी भाई बन्ध वर्गादिबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ ।
ऋण लगानी नगर्नु होला पछि उठाउन गाह्रो हुनेछ । बनावटी कुरा बनाएर तपाईलाई फस्याउने छन् सतर्क रहनुहोला । व्यापारमा उधारो काम नगर्नु होला । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् ।
प्रातःकाल प्रतिकुल नै देखिन्छ । मध्यान्ह पछि समयले साथ दिनेछ । आफुले चाहेको काममा सफलता मिल्नेछ । स्पष्ट वोल्दा आफुलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुदा विचार पु¥याउनु होला । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ ।
विना हिसाव किताव चल्दा दुःख पाईनेछ । गरेका कामबाट लाभ भन्द हानी बढि हुनसक्छ । विश्वासमा पर्दा धोका पाईनेछ । व्यापार,व्यवसायबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन । चोटपटकको भय देखिन्छ ।
महत्वकाँक्षी नबनि काम गर्नु होला । वैदेशिक कार्य योजना आँशिक सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रै हुनेछ । कार्य क्षेत्रबाट बाहिर नजानु होला । सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ ।
वित्तिय कारोवारमा सुधार आउनेछ । अबरुद्ध कार्य योजना अगाडि बढ्ने छन् । सहज र सरल विधिबाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । गएका ठाँउमा मान सम्मान मिल्नेछ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र ३१, २०७५ समय: २३:०६:०१